Samuel Eto'o Oo Saadaashiisa Ka Bixiyay Kulanka Finalka Ee Manchester City Vs Chelsea UEFA Champions League
HomeWararka CiyaarahaSamuel Eto’o oo saadaashiisa ka bixiyay kulanka finalka ee Manchester City Vs Chelsea UEFA Champions League
Samuel Eto’o oo saadaashiisa ka bixiyay kulanka finalka ee Manchester City Vs Chelsea UEFA Champions League
May 29, 2021 Wararka Ciyaaraha, Champions League, Falanqeynta Kulamada 0
laacibkii Hore ee Barcelona iyo Chelsea weeraryahanka Samuel Eto’o ayaa ku taageeray Blues si guul ay uga gaaraan Manchester City finalka UEFA Champions League ee sabtida. Kooxda Pep Guardiola ee Manchester City ayaa loo saadaalinayaa inay ugu cadcadahay hanashada Champions League xilli ciyaareedkan.
Chelsea ayaa u gudubtay finalka Champions League iyadoo looga mahadcelinayo wadar ahaan 3-1 ay kaga badisay Real Madrid semi-finalka. Waxay wajihi doonaan kooxda Manchester City oo wadar ahaan 4-1 kaga soo badisay Paris Saint-Germain si ay boos ugu sii hesho finalka.
Kooxda Pep Guardiola ee Manchester City ayaa horay ugu guuleysatay koobka EFL Cup iyo kan Premier League.
Weeraryahankii hore ee reer Cameroon Samuel Eto’o ayaa u soo ciyaaray kooxda Chelsea intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii 2013-14. Halyeeyga Barcelona ayaa ku faraxsan inuu arko Chelsea oo gaartay finalka Champions League markii ugu horeysay tan iyo 2012, waxaana uu ku taageeray kooxdiisii ​​hore inay la timaado guul lama filaan ah.
“Waan ku faraxsanahay inaan arko kooxdeydii hore ee Chelsea oo mar kale u soo baxeysa finalka Champions League. Dadka qaar, waxay leeyihiin Manchester City ayaa ugu cadcad inay qaado koobka, laakiin feker ahaanteyda, marka finalka la gaaro, ma jiraan waxaas Eto’o ayaa sidaa u sheegay Goal.